इलेक्ट्रिक स्कुटर VS पेट्रोल स्कुटर : फाइदा के ? बेफाइदा के ? | Automotive News Nepal
इलेक्ट्रिक स्कुटर VS पेट्रोल स्कुटर : फाइदा के ? बेफाइदा के ? ८ कार्तिक, २०७६
हाल नेपाली बजारमा समेत विभिन्न ब्रान्डका इलेक्ट्रिक स्कुटर छन् । विश्व बजारमै इलेक्ट्रिक सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै छ । तर इलेक्ट्रिक स्कुटरको लोकप्रियता अझै बढ्न सकेको छैन । यसमा भएका केही कमी कमजोरीलाई सुधार्ने हो भने भविष्य इलेक्ट्रिक स्कुटरको छ ।
मूल्य : यो सम्भवतः ग्राहकको निर्णयलाई असर गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक हो । अहिले पनि इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको मूल्य उनीहरूको पेट्रोल समकक्षहरू भन्दा उच्च छ । सस्तो इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू पनि उपलब्ध छन्, तर तिनीहरूसँग प्रायः छोटो रेन्ज, ढिलो गति, सानो डिलर नेटवर्क आदि हुन्छ । प्रायः बढी मूल्य भएका इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूमा लिथियम आयोन ब्याट्रीको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जुन सस्तोमा आउँदैन।
सञ्चालन खर्च : पेट्रोल स्कुटरको तुलनामा इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउनका लागि कम खर्च लाग्छ । इलेक्ट्रिक स्कुटर उत्पादकहरु पनि यही कुरामा जोड दिन्छन् । थोरै खर्चमै यस्ता स्कुटरलाई चलाउन सकिन्छ र पैसाको बचत हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ ।
चार्जिङ र इन्धन : इलेक्ट्रिक स्कूटरको तुलनामा पेट्रोल स्कुटरमा इन्धन भर्न धेरै सजिलो हुन्छ । एउटा पेट्रोल स्कुटरमा इन्धन भर्नका लागि पेट्रोल पम्पमा केही मिनेट लाग्न सक्छ । तुलनात्मक रूपमा, इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू धेरै घण्टा चार्ज गर्न आवश्यक छ। फास्ट चार्जिङ सुविधा प्रयोग गरे पनि आवश्यक किलोमिटर लोड गर्न करिब एक घण्टा आवश्यक पर्छ । भविष्यमा भने यसमा केही सुधान हुन सक्छ ।
रेन्ज : एक पटक फुल चार्ज गर्दा कति किलोमिटर चलाउन सकिन्छ ? यसले धेरै असर पार्छ । केही प्रचलित विद्युतीय स्कुटरहरूले हाल करिव एक सय किलोमिटरको रेन्ज प्रस्तुत गर्छन् । यो दैनिक प्रयोगको लागि पर्याप्त हुन सक्छ, तर रेन्जको चिन्ता अझै छ । चार्जिङ स्टेशनहरू र ब्याट्री स्वापिङ पूर्वाधार अझै पूर्ण रूपमा विकसित हुन सकेको छैन, त्यसैले खाली ब्याट्रीको साथ असन्तुष्ट हुने सोच कायम रहेको छ । यसको तुलनामा, पेट्रोल भर्नका लागि पम्पहरु सजिलैसँग उपलब्ध छन्। त्यसो भएकोले पेट्रोल स्कुटरको रेन्ज लगभग असीमित छ भन्न सकिन्छ ।
मर्मत खर्च : सामान्य धारणा यो छ कि पेट्रोल स्कुटरहरूको तुलनामा इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूलाई कम मर्मत आवश्यक छ। यद्यपि यो सिद्धान्त अझ ठूलो मात्रामा परीक्षण गर्न बाँकी छ र लामो अवधिमा के हुने हो भन्न सकिन्न । जे भए पनि इलेक्ट्रिक स्कुटरको मर्मत गरिरहनु आवश्यक छैन भनिन्छ । यसो भयो भने हाल पेट्रोल स्कुटरहरुलाई गरिने मर्मत भविष्यमा इतिहास हुनेछ भन्न सकिन्छ ।
वातावरणीय कारकहरू : यदि तपाई वातावरणको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने सायद एक इलेक्ट्रिक स्कुटर छनौट गर्नुहुन्छ । यसले वातावरण संरक्षणमा धेरै नै सहयोग पु¥याउछ ।
इलेक्ट्रिक स्कुटर सबैको छनोटमा पर्नका लागि यसको मूल्यमा कमी हुनुपर्छ, ब्याट्री चार्जिङ र स्वापिङ पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी यस्ता कुरामा ध्यान दिने हो भने यसको प्रयोग अझै बढ्ने निश्चित छ ।
आज वाट भरतपुरमा पनि हर्न निषेध
काठमाडौं र पोखरासँगै आज वाट भरतपुरमा पनि हर्न निषेधित गरिएको छ । आज देखि भरतपुर...
एनआईसी एसिया बैंकले ल्यायो आकर्षक सुपर चामत्कारिक सवारी कर्जा, अन्य कर्जा समेत पाइने
काठमाडौं – एनआईसी एसिया बैंकले तीन सुपर चामत्कारिक कर्जा अन्तर्गत आकर्षक अ...
काठमाडौं – ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी बाटो काट्ने पैदलयात्रुबाट...